Iimpawu, intsingiselo kunye neempawu ezintle zelitye leAmazonite - Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi
Iimpawu, intsingiselo kunye neempawu ezintle zelitye leAmazonite
Ilitye eliqaqambileyo nelithakathayo, i-amazonite inegama lomlambo owabelana ngombala, vumela ukuba uqhutyelwe kude, ufumanise imbali kunye nokuziphatha okuhle.
Ngenxa yombala wayo omhle kunye nokubaluleka okubalulekileyo, ilitye laseAmazon lidla ngokudideka kunye ne-tourmaline okanye i-Chinese Jade. Abantu abanxiba okanye abahamba nayo baya kuba nakho ukufumana ukuzithemba kwabo kwaye basebenzise amandla amatye ukulwa nokudakumba! Kodwa ayizizo kuphela izibonelelo zayo. Ngokuhamba kwexesha, amajoni eAmazon, amaJiphutha kunye neejewellery zonke zawela phantsi komtsalane weli gem liluhlaza-luhlaza, kwaye ngoku lithuba lakho! Funda ngakumbi ngembali yayo kunye nento enokuyenza ukukunceda nokukhusela.
Ukongeza kwinkangeleko yabo entle, ethi ithi ngokwenza loo nto ibenze baxabiswe zijewellery, amatye axabisekileyo kwaye anqabileyo anamandla okumangalisa . Zazisetyenziswa okokuqala kumaxesha akudala kwaye ziye zaqhubeka nokusibonisa ukufaneleka kwazo okumangalisayo. Ngaphambi kokuba ufumane le minerali, nantsi into ekufuneka uyazi:
Luhlaza, luhlaza okwesibhakabhaka, opaque okanye oguqukayo
Ubunzima kunye nobukhulu
250 g ubuncinci / 10 cm ngokomyinge
Usapho lweefeldspars. I-Aluminium silicate kunye nepotash
Umqondiso weenkwenkwezi odibeneyo
Ukusuka kwi- $ 6
Ixabiso layo lihluka kakhulu kwaye linokufikelela kwi-1500 € ngokuxhomekeke kubunzima belitye!
Yintoni imvelaphi yeAmazonite?
Ilitye le-amazonite lineediphozithi ezininzi kwaye ezona zidumileyo eMzantsi Afrika, e-Austria, eBrazil, eCanada, e-United States, e-Ethiopia, eFinland, e-Indiya nase-Russia. Kulula ukuyifumana ke, kodwa iimeko zokufunyanwa kwayo zihlala zingacacanga.
Imbali ityhila ukuba le minerali yafunyanwa okokuqala ngakuMlambo iAmazon, ukusuka apho yathatha khona igama layo. Nangona kunjalo, uphononongo ngalo mbandela luye lwangqina ukuba bekungekho iidipozithi ze-amazonite kulo mmandla. Umntu ebeya kuthi ke ngaloo ndlela adideke izimbiwa nomnye! Ngayiphi na imeko, umbala wayo usikhumbuza amanzi aluhlaza omlambo kwaye ilitye liligcinile eli gama ngaphandle kwesi siphithiphithi.
Ilitye elixabiseke kakhulu mandulo
Ilitye leAmazonite laqala ukusetyenziswa kwakudala, iminyaka engama-3 000 ngaphambi kwexesha lethu. Kwafunyanwa eYiputa, eIndiya, eMesopotamiya naseSudan. E-Egypt, yayisetyenziswa ngokubanzi ukwenza ubucwebe kunye Isangqa se-scarab esifunyenwe engcwabeni likaTutankhamun bubungqina boku! Sikwabona ipleyiti ye-amazonite ikrwelwe ngemigca embalwa yokubhaliweyo kwiNcwadi yabafileyo.
EMesopotamia, i-amazonite nayo yayinendawo ebalulekileyo kuba yayidibene noTiamat, uthixokazi weelwandle kunye namanzi anetyuwa. Kwakunokulunga kokugcina isiphithiphithi. AmaGrike asebenzisa amazonite ukwenza bahombise amakhaka abo kwaye babakhusele, njengamajoni aseAmazon.
IAmazonite yaziwa njenge 'ilitye lamaAmazon'. Ama-Amerindiya aseRio Negro athi bavela 'kwilizwe labasetyhini ngaphandle kwamadoda'. Eli litye ke liyakumema ukuba uzimele kwaye uncede uthathe ubomi bakho ngesandla ngokuzikhusela kwiimvakalelo ezingalunganga. Ikuvumela ukuba wazi ukuba awudingi mntu kwaye unokuya kwizinto wedwa.
Kule mihla, ilitye le-amazon lisetyenziselwa iipropathi zalo, kodwa nakwigolide, njengama-Egypt. Amakhonkco amaninzi, imihlobiso, izacholo, okanye izacholo zeeperile zenziwe ngeamazonite.
Lilitye eliphilisayo kwaye linezibonelelo ezininzi
Amatye anqabileyo ayaziwa ngezibonelelo zomzimba nezengqondo. Kuyenzeka ukuba uziphilise ngokwakho ngombulelo kubo! IAmazonite iluncedo ku:
Ukunceda ukuvusa uvuyo lobomi kwaye ungathathi yonke into ngokungathí sina.
Ukubuyisa umphefumlo womntwana wakho
Ukukhetha ukunxibelelana kwabantu kunye nokuzimela
Ukuzolisa inkqubo ye-nervous
Ukunyusa ukujikeleza kwegazi
Ukunciphisa iicramps kunye nokuqina ngenxa ye-osteoarthritis
Ngaphandle kokukuthuthuzela ngokweemvakalelo nangokwasemzimbeni, ilitye leAmazonite linokucoca indawo yakho yangaphakathi ... Inamandla okuphelisa amaza ombane kunye nombane okhutshwe ziifowuni kunye neekhompyuter zethu, phakathi kwabanye. Akulunganga, akunjalo?
Ulihlaziya njani ilitye lamaAmazonite kumandla alo:
Ukucoca iAmazonite ngaphambi kweseshoni ye-lithotherapy, yiphule ngokulula ngamanzi angenamanzi. Emva koko sebenzisa i-quartz okanye imfumba ye-amethyst ukuyenza ngokutsha.
Ingcebiso enomdla: Ukuba awunawo amanzi e-demineralized atholakalayo, amanzi emvula anokwenza iqhinga. Cinga ngokuqokelela ezinye okanye ulinde de kube ilanga lingatshisi!
Umxholo onomdla ngakumbi:
Uwenza njani amandla kunye neempawu ezintle zezi zityalo zili-10
Yintoni Uphawu Lwamanzi? Fumanisa intsingiselo yokomoya
Ngoobani aba 5 beZimpawu eziChukumisayo zeZodiac?
Kutheni abantu beKufumana unomtsalane ngokusekwe kuPhawu lwakho lweZodiac
zii-libras ezihambelana ne
Scorpio uphawu lwamanzi
utyikitye indoda ebukhali inomdla kuwe